Mitemo nemamiriro - Mora Mujaho Wolfgang Mohr
General mazwi uye mamiriro ane ruzivo nevatengi
Mitengo uye mazwi ekubhadhara
Dhirivhari uye mamiriro ekutumira
Dhizaina yekuremara (waranti)
Kununura zvipo zvezvipo
Kugadziriswa kwekupokana kwekupokana
1.1 Aya mazwi akajairwa uye mamiriro (pano "GTC") yaWolfgang Mohr, anoshanda pasi pe "Mora-Mujaho" (pano "mutengesi"), anoshanda kuzvibvumirano zvese zvekuendesa zvinhu izvo mutengi kana muzvinabhizimusi (pano "mutengi") Mutengesi maererano nezvinhu zvinoratidzwa nemutengesi muchitoro chake chepamhepo. Iko kuiswa kweiye mutengi mamiriro ezvinhu zvinorambwa, kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe nzira.
1.2 Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anoshanda zvinoenderana nezvibvumirano zvekutakura mavhoti, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira.
1.3 Mutengi mukati mezvinorehwa nematemu aya nemamiriro chero munhu wechisikigo anopedzisa kutengeserana zviri pamutemo nekuda kwezvinonyanya kushambadza kana basa ravo rakazvimirira rehunyanzvi. Anamuzvinabhizimusi mupfungwa yemitemo iyi nemamiriro ezvinhu munhu chaiye kana wepamutemo kana kudyidzana zviri pamutemo avo, pavanopedzisa kuita zviri pamutemo, vanoita mune ravo rekushambadzira kana rakazvimirira rehunyanzvi chiitiko.
2) Magumo echibvumirano
2.1 Rondedzero yechigadzirwa inowanikwa muchitoro chevatengesi online haimiriri zvinopihwa zvinosunga pachikamu chemutengesi, asi zvinoshanda kuendesa chinosunga chinopihwa nemutengi.
2.2 Mutengi anogona kuendesa chikumbiro achishandisa online fomu fomu inosanganiswa muchitoro chevatengesi online. Mushure mekuisa zvinhu zvakasarudzwa mumotokari yekutenga uye nekufamba nenzira yekuodha zvinhu, mutengi anotumira chibvumirano chinosunga zviri pamutemo maererano nezvinhu zviri mungoro yekutengesa nekudzvanya bhatani rinopedzisa kuita kwekuodha. Mutengi anogona zvakare kuendesa kupi kune mutengesi nerunhare, email, kutumira kana fomu rekutaurirana repamhepo.
2.3 Mutengesi anogona kugamuchira chinopihwa nemutengi mukati memazuva mashanu,
nekutumira mutengi runyorwa rwemanyorerwo kana kuisirwa warudzidziso muchimiro chefeksi (fakisi kana email), iko kupihwa kupi gwaro rekusimbiswa nemutengi,
nekuendesa zvinhu zvakarairwa kumutengi, uko kuwanikwa kwezvinhu kumutengi kuri kusarudza, kana
nekukumbira mutengi kubhadhara mushure mekuisa rake kodhi.
Kana dzimwe dzedzidziso dzambotaurwa dziripo, chibvumirano chinopedzwa panguva apo imwe yedzidziso dzambotaurwa dzatanga kuitika. Nguva yekubvuma kugoverwa inotanga pazuva rinotevera mutengi paakatumira chinopihwa uye chinopera panopera zuva rechishanu zvichitevera kuiswa kwechipo. Kana mutengesi asingagamuchiri izvo zvinopihwa nemutengi mukati menguva yakatarwa, izvi zvinoonekwa sekuramba kwekupihwa, nemhedzisiro yekuti mutengi haasungirwe nekuzivisa kwake chinangwa.
2.4 Kana nzira yekubhadhara "PayPal Express" ikasarudzwa, mubhadharo unogadziriswa nemupi webasa rekubhadhara PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (pano: "PayPal"), zvichienderana nePayPal - Mitemo yekushandisa, inowanikwa pa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full kana - kana mutengi asina account yePayPal - pasi pemamiriro ekubhadhara pasina account yePayPal, inogona kutariswa pa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kana mutengi akasarudza "PayPal Express" senzira yekubhadhara panguva yekuodha online, anopawo odha yekubhadhara kuPayPal nekudzvanya bhatani rinopedzisa maitiro ekuraira. Mune ino kesi, mutengesi atozivisa kugamuchirwa kweye mutengi kupihwa panguva iyo panguva iyo mutengi anokonzeresa nzira yekubhadhara nekudzvanya bhatani rinopedzisa maitiro eodha.
2.5 Kana uchiendesa chinopihwa kuburikidza nefomu yemutengesi yepamhepo fomu, zvinyorwa zvechibvumirano zvichachengetwa nemutengesi mushure mekunge chibvumirano chapera uye chotumirwa kumutengi nemhando yemavara (semuenzaniso e-mail, fakisi kana tsamba) mushure mekunge odha yake yatumirwa. Chero kupi kwekupi kupihwa kwerugwaro rwechibvumirano nemutengesi hakuitwe. Kana mutengi akamisikidza account yemushandisi muchitoro chevatengesi online asati aendesa odha yake, iyo data reodha rinochengetwa pawebhusaiti yemutengesi uye inogona kuwanikwa mahara nemutengi kuburikidza neayo password-yakachengetedzwa account yemushandisi nekupa inoenderana data rekupinda.
2.6 Usati waendesa odha inosunga kuburikidza nefomu yemutengesi yepamhepo, mutengi anogona kuona zvingangoita zvikanganiso nekuverenga zvakanyatso ruzivo rwakaratidzwa pachiratidziri. Nzira inoshanda yehunyanzvi yekuziva zvirinani zvikanganiso zvekuisa inogona kunge iri basa rekuwedzera rebhurawuza, nerubatsiro rweanomiririrwa pachiratidziri. Mutengi anogona kugadzirisa zvaakanyorera sechikamu chemagetsi ekuodha achishandisa zvakajairika keyboard uye mbeva mashandiro kudzamara abaya bhatani rinopedzisa maitiro ekuraira.
2.7 Mitauro yechiGerman neyeChirungu zviripo pakupera kwechibvumirano.
2.8 Kugadziriswa kwekuraira uye kuonana zvinowanzoitwa neemail uye otomatiki kurongeka kugadzirisa. Mutengi anofanira kuona kuti e-mail kero yakapihwa naiye yekugadzirisa odha yacho ndeyechokwadi kuti mae-mail anotumirwa nemutengesi agone kugamuchirwa pane ino kero. Kunyanya, kana uchishandisa SPAM mafirita, mutengi anofanira kuona kuti ese maemail anotumirwa nemutengesi kana nevechitatu mapato akapihwa neodha yekugadzirisa anogona kuendeswa.
3) Kodzero yekubvisa
3.1 Vatengi vanowanzove nekodzero yekutora.
3.2 Ruzivo rwekuwedzera pamusoro pekodzero yekubvisa runogona kuwanikwa mumutemo wekuregera mutengesi.
4) Mitengo uye mazwi ekubhadhara
4.1 Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira mune yemutengesi tsananguro, iyo mitengo yakapihwa mitengo izere iyo inosanganisira zviri pamutemo mutero wekutengesa. Chero ipi yekuwedzera yekuendesa uye yekuendesa mitengo inogona kunge yakaitika inotsanangurwa zvakasiyana muchikamu chakakodzera chechigadzirwa.
4.2 Panyaya yekuendesa kune dzimwe nyika dziri kunze kweEuropean Union, mari dzekuwedzera dzinogona kumuka idzo mutengesi asina basa uye idzo dzinofanira kutakurwa nemutengi. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, mutengo wekuchinjisa mari kuburikidza nemasangano echikwereti (semuenzaniso mari yekuchinjisa, mari yekuchinjana) kana mitero yekunze kana mutero (semuenzaniso mutero). Mari dzakadai dzinogona zvakare kusimuka zvine chekuita nekutamisa mari kana iko kuendesa kusingaitwe kune imwe nyika iri kunze kweEuropean Union, asi mutengi anoita muripo kubva kune imwe nyika iri kunze kweEuropean Union.
4.3 Iyo yekubhadhara sarudzo (s) ichaendeswa kune mutengi muchitoro chevatengesi online.
4.4 Kana kubhadharisa kwekutanga nekuchinjisa kubhangi kwabvumiranwa, kubhadhara kunofanirwa nguva pfupi mushure mekupedzwa kwechibvumirano, kunze kwekunge mapato acho abvumirana zuva rakazotevera.
4.5 Kana uchibhadhara uchishandisa imwe yenzira dzekubhadhara dzinopihwa nePayPal, kubhadhara kunoitwa nemupi webasa rekubhadhara PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (pano: "PayPal"), zvichienderana nePayPal - Mitemo yekushandisa, inowanikwa pa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full kana - kana mutengi asina account yePayPal - pasi pemamiriro ekubhadhara pasina account yePayPal, inogona kutariswa pa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Kana iyo nzira yekubhadhara "PayPal Kiredhiti" ikasarudzwa (kubhadhara muzvikamu kuburikidza nePayPal), mutengesi anopa mari yake yekubhadhara kuPayPal. Usati wabvuma kuziviswa kwemutengesi, PayPal inoita cheki yechikwereti ichishandisa data revatengi rakapihwa. Mutengesi anochengetera kodzero yekuramba mutengi iyo "PayPal Kiredhiti" nzira yekubhadhara kana paitika mhinduro yakaipa. Kana iyo nzira yekubhadhara "PayPal Kiredhiti" ichibvumidzwa nePayPal, mutengi anofanira kubhadhara mari yeinvoice kuPayPal zvinoenderana nemamiriro akatsanangurwa nemutengesi, ayo anoziviswa kwaari muchitoro chevatengesi online. Mune ino kesi, iye anogona chete kubhadhara PayPal nechikwereti-kuburitsa mhedzisiro. Nekudaro, kunyangwe mune yekupihwa kupihwa kwezvekureva, mutengesi anoramba aine chekuita nekubvunza kwevatengi vese eg. B. pane izvo zvinhu, nguva yekuendesa, kutumira, kudzoka, zvichemo, kudzoserwa kuzivisa uye kudzoka kana kiredhiti manotsi.
4.7 Kana iwe ukasarudza imwe yenzira dzekubhadhara dzinopihwa ne "Shopify Kubhadhara" sevhisi yekubhadhara, mubhadharo unogadziriswa nemubhadhari webasa mupiro Stripe Kubhadhara Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland (kuno kunotevera "Stripe"). Nzira dzekubhadhara dzega dzinopihwa kuburikidza neShopify Kubhadhara dzinoziviswa kumutengi muchitoro chevatengesi online. Kugadzirisa kubhadhara, Stripe inogona kushandisa mamwe mabasa ekubhadhara, ayo anogona kubhadhara mamiriro akasarudzika, uko mutengi anogona kuziviswa zvakasiyana. Rumwe ruzivo nezve "Shopify Kubhadhara" rinowanikwa paInternet pa https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.8 Kana iyo nzira yekubhadhara "PayPal invoice" ikasarudzwa, mutengesi anopa mari yake yekubhadhara kuPayPal. Usati wagamuchira kuziviswa kwemutengesi, PayPal inoita cheki yechikwereti ichishandisa iyo data yemutengi yakapihwa. Mutengesi anochengetera kodzero yekuramba mutengi iyo "PayPal invoice" nzira yekubhadhara kana paitika mhinduro yakaipa. Kana iyo nzira yekubhadhara "PayPal invoice" ichibvumidzwa nePayPal, mutengi anofanira kubhadhara mari yeinvoice kuPayPal mukati memazuva makumi matatu ekugamuchira zvinhu, kunze kwekunge PayPal yataura imwe nguva yekubhadhara. Mune ino kesi, iye anogona chete kubhadhara PayPal nechikwereti-kuburitsa mhedzisiro. Nekudaro, kunyangwe mune yekupihwa kupihwa kwezvekureva, mutengesi anoramba aine chekuita nekubvunza kwevatengi vese eg. B. pane izvo zvinhu, nguva yekuendesa, kutumira, kudzoka, zvichemo, kudzoserwa kuzivisa uye kudzoka kana kiredhiti manotsi. Uye zvakare, iyo General Mitemo yekushandisa yekushandisa kutenga pane account kubva kuPayPal inoshanda, iyo inogona kutariswa pa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
4.9 Kana nzira yekubhadhara "PayPal yakananga kubhadhara" ikasarudzwa, PayPal inotora mari yeinvoice kubva kubhengi revatengi kasitoma mushure mekunge SEPA yakapihwa mvumo yekubhadharisa, asi kwete isati yapera iyo nguva yeruzivo rwemberi pachinzvimbo chemutengesi. Pre-chiziviso chero kutaurirana (semuenzaniso invoice, mutemo, kondirakiti) kumutengi anozivisa chibhadharo achishandisa SEPA yakananga kubhengi. Kana iyo yakabhadharwa isina kuregererwa nekuda kwekusakwana kwemari muaccount kana nekuda kwekupihwa zvisiri izvo zvebhangi, kana kana mutengi achiramba kubhengi yakananga, kunyangwe iye asina kodzero yekuita kudaro, mutengi anofanira kutakura zvikwereti zvakaitwa nebhanga rakanangana kana ari iye ane mhosva neizvi .
5) Kuendesa uye mamiriro ekutumira
5.1 Kuunzwa kwezvinhu kunoitika munzira yekuendesa kunzvimbo yekuendesa yakataurwa nemutengi, kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira. Paunenge uchigadzirisa iko kutengeserana, kero yekuendesa yakapihwa mukutengesa kwekuraira kwemutengesi inoenderana.
5.2 Midziyo inounzwa nemumiriri wekutumira inoendeswa "yemahara curbside", i.e. kusvika kuruzhinji curbside iri padyo nekero yekuendesa, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira mune yekutumira ruzivo muchitoro chevatengesi online uye kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe nzira.
5.3 Kana kuunzwa kwemidziyo kukakundikana nezvikonzero zvekuti mutengi ane basa nazvo, mutengi anotakura zvakaringana mitengo yakawanikwa nemutengesi. Izvi hazvishande zvine chekuita nemari yekutumira kana mutengi achinyatso kushandisa kodzero yake yekubvisa. Pamitengo yekudzosa, kana mutengi achishandisa kodzero yake yekubvisa, izvo zvinopihwa mumutemo wekuregera mutengesi zvinoshanda.
5.4 Panyaya yekuzviunganidzira-wega, mutengesi anotanga kuzivisa mutengi neemail kuti zvinhu zvaakaraira zvakagadzirira kuunganidzwa. Mushure mekugamuchira iyi e-mail, mutengi anogona kutora zvinhu kubva kumuzinda wemutengesi mushure mekubvunzana nemutengesi. Mune ino kesi, hapana mari yekutumira ichabhadharwa.
5.5 Mavhavhari anopiwa mutengi seizvi:
6) Kuchengetwa kwemusoro
Kana mutengesi akabhadhara kare, iye anochengeta muridzi weizvo zvinhu zvakadzoserwa kudzamara mutengo wekutenga waakabhadhara wabhadhara zvizere.
7) Dhiza rehurema (waranti)
7.1 Kana chinhu chakatengwa chisina kukwana, izvo zvinopihwa zvemutemo zvisungo zvekukanganisa zvinoshanda.
7.2 Mutengi anobvunzwa kunyunyuta kununuri nezve zvakaunzwa zvinhu zvine pachena kukuvara kwekufambisa uye kuzivisa mutengesi weizvi. Kana mutengi asingateerere, izvi hazvina zvazvinobatsira pamitemo yake yepamutemo kana yechibvumirano chekukanganisa.
8) Kununura zvipo zvipo
8.1 Mavhavha anogona kutengwa kuburikidza nemutengesi wemuchitoro chepamhepo (pano "voucher echipo") anogona kungoregererwa muchitoro chemutengesi, kunze kwekunge zvataurwa neimwe vocha.
8.2 Mavavha ezvipo uye mwero wakasara wemavavha echipo unokwanisa kuregererwa panopera gore rechitatu mushure megore rakatengwa vavhavha. Chikwereti chasara chinopihwa mutengi kudzamara zuva rapera.
8.3 Zvipo zvekupa mavhavhari dzinogona kudzikinurwa chete maitiro ekuraira apera. Kuzotevera kubhadharisa hakugoneke.
8.4 Chipo chimwe chete chevavhosi chinogona kuregererwa paodha.
8.5 Mavavha ezvipo anogona chete kushandiswa kutenga zvinhu uye kwete kutenga mamwe mavhavha echipo.
8.6 Kana kukosha kwechipo chechipo chisina kukwana kuvhara odha, imwe yedzimwe nzira dzekubhadhara dzinopihwa nemutengesi dzinogona kusarudzwa kugadzirisa mutsauko.
8.7 Bhalansi yechipo chevhavhavha haibhadharwi nemari kana mubereko wabhadharwa.
8.8 Chipo chevhavha chinachinjika. Mutengesi anogona, aine simba rekubvisa, kubhadhara muridzi uyo anonunura vocha yechipo muchitoro chevatengesi online. Izvi hazvi shande kana mutengesi aine ruzivo kana kwakanyanya kuregeredza kusaziva kweasina mvumo, kutadza kwemutemo kana kushaikwa kwemvumo yemuridzi.
9) mutemo unoshanda
Mutemo weFederal Republic yeGermany unoshanda kune hukama hwese hwepamutemo pakati pemapato, kunze kwemirau pakutenga kwenyika kutengesa zvinhu zvinotakurika. Kune vatengi, sarudzo iyi yemutemo inoshanda chete mukati sekudzivirirwa kwakapihwa kusiri kubviswa nezvisungo zvemitemo yenyika iyo mutengi anogaramo.
10) Zvimwe kugadzirisa gakava
10.1 Komisheni yeEU inopa chikuva chekugadzirisa gakava pamhepo paInternet pasi peiyi link inotevera: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Iyi puratifomu inoshanda senzira yekusangana kwekunze-kwedare kugadziriswa kwemakakatanwa anobva mukutengesa kwepamhepo kana zvibvumirano zvebasa umo mutengi anobatanidzwa.
10.2 Mutengesi haana kusungirwa kana kuda kutora chikamu mukugadzirisa gakava pamberi pebhodhi arbitration board.